Umbono Laser Cutting Machine - Laser Golden
IGOLENENLASER Uluhlu olupheleleyo lweeNkqubo zokuSika iKhamera yeLaser
Ukusikwa kweLaser yodweliso lwangaphantsi kwilaphu elishicilelweyo lemalaphu kunye namalaphu, iilebheli ezilukiweyo okanye ezihonjisiweyo, isixhobo, iilebhile eziprintiweyo, amanani, iileta, iilogo…
Oomatshini bokucheba i-laser ye-laser yokusika ngenkqubo yokubona sele baphuhlisiwe benamava kubugcisa bokugqibela phambili. IGoldenlaser izabalazela ukukunika izisombululo zokusika i-laser ukuzisa umgangatho oyingqayizivele, ukusebenziseka okuhle kunye nokuchaneka okungahambelaniyo nokuhamba kwakho.
Umbono Laser Ukucanda Matshini for Sublimation Ilaphu
Imodeli Hayi: I-ZDJG-160100LD
High ngqo iimpawu zobhaliso ukubeka kunye deformation imbuyekezo okrelekrele kuba ngokuchanileyo laser nangokukrola idayi sublimation iilogo eziprintiweyo, oonobumba kunye neenamba.
Isicoci se-Laser se-Smart Vela kunye neKhamera ye-Contour Cut
Lo ngumatshini we-laser onamandla wokusika i-contour. NgeKhamera ye-HD enexhotywe, umatshini unokuthatha iifoto zepateni yedijithali eprintiweyo okanye emfakiweyo, aqaphele ukungqinelana kweepateni aze anike imiyalelo yokusika entloko ye-laser.